H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) - Hello Sayarwon
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ )
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ကဘာလဲ။
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါသည် တုပ်ကွေးဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် လူများတွင် ထိုဗိုင်းရပ်စ်ကို မတွေ့ရဘဲ ဌက်များတွင်တွေ့ရပါသည်။
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါကိုဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲများစွာရှိသည့်အနက် တရုတ်ပြည်တွင် ဖြစ်သွားခဲ့သော H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါသည် အသွင်မတူညီသော ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ အသစ်တခုကြောင့် လူနှင့် ဌက်များအားကူးစက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါသည် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင် ပြီး အသက် ၆၀ကျော်လျှင် ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်ထိုဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များကို လျှော့ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၂ရက်မှ ၈ ရက်အတွင် ရောဂါလက္ခဏာများစတင်နိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် ဖြစ်နေကျ ရာသီတုပ်ကွေးလက္ခဏာများနှင့်တူပြီး
အချို့သူများသည် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်ပြီး မျက်လုံးတွင်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် အနုစားအဆင့် မျက်ကြည်လွှာရောင်ခြင်း H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါ ကို သိနိုင်သော တိကျသည့် တခုတည်းသော လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ထိုရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တရုတ်ပြည်ရှိ ဌက်မွေးမြူရေးခြံများတွင်စတင်တွေ့ရှိရပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တခုတည်းရှိ လူများကို ကူးစက်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ရရှိထားသော အထောက်အထားများအရ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသော ဌက်များနှင့် ယင်းတို့နေထိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်မှ တဆင့် လူတို့နှင့် ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့် လူများတွင် H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါသည်။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါသည် ရောဂါဖြစ်နေသော ဌက်များနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ ထိုဌက်များ၏ အမွေးအတောင်၊ တံတွေး နှင့် မစင်တို့နှင့် ထိတွေ့မိခြင်းတို့မှ ကူးစက်နိုင်ချေအများဆုံးဖြစ်သည်။
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါသည် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ကူးစက်နိုင်ချေ နည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့်ရောဂါဖြစ်နေသော ဌက်များသည် အဓိကအန ္တရာယ်ရှိသော သားကောင်များဖြစ်ပါသည်။
လူအချင်းချင်းတွင် ကူးစက်မှုပုံစံသည် ဆန်းကြယ်ပါသည်။ H7N9 ရောဂါပိုးနှင့် ထိတွေ့သူများအနက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူများသာ ကူးစက်ခံရလေ့ရှိပါသည်။
မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများအရ အမျိုးသမီး များသည် H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံနိုင်ရချေနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ချေပိုများကြောင်း ယူဆရသော်လည်း သေချာသော တွေ့ရှိချက်တခု မဟုတ်သေးပါ။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်တွင် H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်နေပြီဟု သံသယရှိပါကပထမဦးစွာ သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကို ကစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက် တိကျသော ကုသမှုလုပ်ရန် သိသင့်သည်များကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နေမကောင်းဖြစ်နေသူ၏အသက်ရှုလမ်းကြောင်း တလျှောက်(နှာခေါင်း၊ လည်ပင်းနှင့် အဆုတ်တို့)မှ အရည်နမူနာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးထဲတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို စစ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
H7N9 Flu (အိပ်ခ်ျဆဲလ်ဗင်းအန်နိုင်း တုပ်ကွေးရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တုပ်ကွေးဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေသော ပိုးသတ်ဆေးများစွာရှိသော်လည်း ယခုအခါဆေးယဉ်ပါးမှုပြသနာများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုပိုးသတ်ဆေးများမှာ
Amantadine and rimantadine (Flumadine)
Zanamivir (Relenza) တို့ဖြစ်သည်။
ထိုဆေးများကို ရောဂါလက္ခဏာများကို ခံစားရပြီး ၂ရက်အတွင်းသောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့သော ဌက်တုပ်ကွေးအမျိုးအစားများသည် Oseltamivir ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ယဉ်ပါးစပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် H7N9 တုပ်ကွေးရောဂြါဖစ်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
လက်ရှိအနေအထားအရ ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာရောဂါပိုးများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဌက်များ၏ တံတွေး၊ ချွဲများနှင့် မစင်များကို မိမိနှင့် မထိတွေ့ရန် ၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် မရှိရန် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသည် လူတို့၏ မျက်စိ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှတ ဆင့် နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
H7N9 တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားသော မွေးမြူရေးခြံများတွင် အလုပ်လုပ်သူများအတွက်လည်း ဇီဝလုံခြုံမှုရှိစေရန် အကာအကွယ်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ခြင်း နှင့် လက်ဆေးခြင်း အလေ့အထများကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသင့်သည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 12, 2019
H7N9 flu.https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-faq.htm.Accessed February 10, 2017.
H7N9 flu.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bird-flu/basics/definition/con-20030228. Accessed February 10, 2017.
H7N9 flu.https://www.cdc.gov/flu/avianflu/prevention.htm. Accessed February 10, 2017.
Sporotrichosis (စပိုရို တရိုင်ကိုးစစ်(အရေပြားမှိုစွဲသည့်ရောဂါ))
Interstitial Lung Disease (အဆုတ်ကြားခံနယ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း)
Pneumonitis (အဆုတ်ရောင်ခြင်း )
Digestive Disorders (အစာချေဖျက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော မူမမှန်မှုများ)
Kidney Abscess (ကျောက်ကပ်ပြည်တည်ခြင်း)
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု)